आइफोन १२ मा कस्ता-कस्ता फिचर आउलान्? :: Setopati
आइफोन १२ मा कस्ता-कस्ता फिचर आउलान्?
एजेन्सी काठमाडौ, असोज ९
एप्पलले गत हप्ता नयाँ आइप्याड, एप्पल घडी र अन्य नयाँ उपकरणहरु सार्वजनिक गरेको थियो। एप्पल प्रयोगकर्ताहरु अब आइफोन १२ सार्वजनिक हुने प्रतिक्षामा छन्।
आइफोन १२ सार्वजनिक हुने वा नहुनेबारे एप्पलले आधिकारिक सूचना दिएको छैन। अमेरिकी अखबार ‘द वाल स्ट्रिट’ले भने कम्पनीले नयाँ आइफोन आउँदो हप्ता ल्याउनसक्ने अनुमान गरेको छ।
यसले एप्पलका प्रयोगकर्ताहरुमा नयाँ आइफोनमा कस्ता फिचर आउलान् भन्ने जिज्ञासा बढाएको छ। सबैमा आइफोन १२ बाट ठूलो अपेक्षा राखिएकाे देखिन्छ।
सिएनएन बिजिनेसको अनुसार ‘द वाल स्ट्रिट’का विश्लेषकले नयाँ आइफोनमा प्रयोगकर्ताले नयाँ परिवर्तन देख्नसक्ने बताएका छन्।
विश्लेषकले नयाँ आइफोनमा गरेको केही अनुमान यस्ता छन्ः
५ जी आइफोन
आइफोन १२ मा ५ जीको सुविधा हुने सम्भावना बढी रहेको ‘द वाल स्ट्रिट’का विश्लेषक टम फोर्टको भनाइ छ। सामसुङ र मोटोरोला जस्ता प्रतिस्पर्धी कम्पनीले आफ्नो मोबाइलमा ५ जी नेटवर्कको सुविधा दिइसक्दा एप्पलले पनि यहीँ वर्ष नयाँ आइफोनमा यो फिचर राख्नसक्ने अनुमान गरेको छ।
यो सुविधा आइफोन १२ का सबै मोडलमा उस्तै नहुनसक्ने उनले बताएका छन्। केही मोडलमा ५ जीको कम सुविधा हुनसक्छ, अर्थात् यो नेटवर्क ४ जी भन्दा राम्रो तर ५ जी भन्दा कम ढिलो चल्ने हुनसक्छ। अन्य मुख्य मोडलमा भने ५ जीको राम्रो सुविधा हुनसक्ने भनिएको छ।
चार नयाँ मोडल आउनसक्ने
एप्पलले सामान्यता प्रत्येक आइफोनमा नयाँ संस्करणहरु पनि निकाल्छ। विश्लेषकहरुको अनुसार यो वर्षको आइफोन १२ मा तीनदेखि चारसम्मको संस्करण आउन सक्छ।
यी चार आइफोन मध्ये एउटामा ६.७ इन्च डिस्प्लेको फिचर हुनसक्ने र अर्को अहिलेसम्मकै सबैभन्दा सानो आइफोन हुन सक्छ।
एप्पलको उपकरणका मूल्य ठ्याक्कै अनुमान लगाउन नसक्ने विश्लेषकहरु बताउँछन्। गत वर्ष सार्वजनिक भएको आइफोन ११ को मूल्य करिब ७०० अमेरिकी डलरसम्म थियो। यो मूल्य आइफोन ८ पछिको एप्पलको सबैभन्दा कम मूल्य हो।
यो वर्ष आइफोन १२ को मूल्य करिब ८०० अमेरिकी डलरसम्म हुने अनुमान गरिएको छ। हाल राख्नसक्ने ५ जी नेटवर्क सुविधाको कारण मूल्य बढ्ने आकलन गरिएको हो।
क्यामेरामा नयाँ फिचर अपडेट
एप्पलले आफ्ना केही नयाँ आइफोनको क्यामेरा मोडलमा ‘लिडर सेन्सर’ समावेश गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यो फिचरले अध्यारो कोठामा क्यामेरा फोकस मिलाउँछ।
यी सबै जानकारी बाहेक आइफोन १२ मा चार्जिङ ब्लक हुन नसक्ने बताइएको छ। आइफोन प्रयोगकर्ताहरुसँग अगाडि नै प्रयोग गरिरहेको चार्जिङ ब्लक हुने भएकोले विश्लेषकहरुले यसपाली एप्पले चार्जरको ब्लक नराख्न सक्ने अनुमान लगाएका छन्।